Ngaba Izilwanyana Zivakalelwa? 5 Izifundo ngezilwanyana zengqondo
Izifundo eziPhambili kwiZilwanyana
Iyintoni inja yakho evakalelwa xa edlala nedoti ayithandayo? Ziziphi iimvakalelo zakho ikati xa uphuma endlwini? Kuthi malunga ne-hamster yakho: ingaba uyazi ukuba kuthetha ntoni xa uyamanga?
Ukongezelela, abantu abaninzi banokuvakalelwa kukuba iimpawu zesilwanyana - ukukwazi izilwanyana ukuba bazive kwaye zibone izinto - kucacile: Emva koko, nabani na owake waba ngumzali wesilwanyana unokubona ngokucacileyo ukuba izilwanyana zabo zibonisa ukwesaba, ukuxhamla, uvuyo kunye nomsindo. Kodwa kwenzululwazi, lo bungqina obungqinayo akwanele: Kufuneka kubekho ngaphezulu.
Kwaye kukho okungakumbi.
Kule minyaka, kukho iiphando ezininzi malunga nempilo yezilwanyana. Apha, siya kuthintela ezimbalwa, kodwa kuqala inqaku malunga nenkqubo: kwezinye izilwanyana, izazinzulu zihlola indlela abavakalelwa ngayo. Ngamanye amazwi, uphando lweentonga kunye neenkukhu zenziwe ngokujonga indlela abaziphatha ngayo. Olunye uphando lwenziwe ngoluvo lweengqondo: Ngokuqhelekileyo, ezi ntlobo zophando zenziwa kwizilwanyana eziya kubanyamezela, njengezinja kunye namahlengethwa. Ayikho indlela efanayo yokuvavanya ukuvavanya kwizilwanyana, oko kunengqiqo, njengokuba zonke izilwanyana - nokuba zizilwanyana zenyama - zihluke kwiindlela eziziqondayo kunye nezixhomekeke kwihlabathi.
Nazi ezinye ezimbalwa zezifundo eziphambili ezenziwa kwintetho yezilwanyana:
IYunivesithi yaseChicago Study ivakalisa uvelwano kwiidoda
UAdam Gault / Getty Izithombe
Uphononongo olwenziwa ngu-Inbal Ben-Ami Bartal, uJean Decety, kunye noPeggy Mason kwiYunivesithi yaseChicago bafumanisa ukuba iirhwe ezingakhange ziqeqeshwe ukwenza njalo ziya kukhulula ezinye iirath eziye zithintelwe, kwaye zenza oku ngokusekelwe kwintsilelo. Olu pho nonongo luye lwafundwa kwiphando elingaphambili elibonakaliswe ukuba amagundane abuye abe novelwano (nangona isifundo sifaka intlungu kwiimiceba) kunye nesifundo esilandelayo esasifumana uvelwano ezinkukhu, kunye (ngaphandle kokulimaza iinkuku). Kaninzi "
UGregory Burns Studies Dog Sentience
UJamie Garbutt / Getty Izithombe
Izinja, ngenxa yobume babo basekhaya kunye nesibheno sendawo yonke, zijoliswe kakhulu kwizenzululwazi ezizama ukuqonda imvakalelo yezilwanyana. UGregory Burns, uprofesa we-neuroeconomics kwiYunivesithi yase-Emory kunye nomlobi othi "Njani Izinja Zithanda Ngayo: I-Neuroscientist kunye neNtshukumo Yakhe Inqununu yeCanine Brain," yenze isifundo malunga nenja yezinja, apho yakufumanisa ukuba umsebenzi wokufunda amagama, inxalenye yengqondo ebonisa ulwazi malunga nezinto ezenza sibe nolonwabo, njengothando okanye ukutya okanye umculo okanye ubuhle) kwizinja zanda kwiempendulo ezifanayo ezixhaswa ngabantu: ukutya, abantu abaqhelekileyo kunye umnini oye waphuma ngokukhawuleza waza wabuya. Oku kunokubonisa ukuba inja yeenja zivakalelwa iimvakalelo ezintle njengabantu. Ukushisa kuqhube isifundo ngokubetha izinja kwimishini ye-MRI kwaye ubukele umsebenzi wokucoca. Kaninzi "
Scientific Studies kwiDolphins
cormacmccreesh / Getty Izithombe
Kule minyaka, uphando oluninzi lwenziwe kwi-braphin brains. Uphando olutsha luye lwaphakamisa ukuba iidonfini ziza kuphela okwesibini kwizikhundla zabo zobuchule kubantu, ezinezinga eliphezulu lokuziqonda kunye nokukwazi ukuva ubunzima nokuhlupheka. Olu hlalutyo lwenziwe nge-MRI. Iidonfini zinokuphinda zixazulule iingxaki kunye neendawo zokudibanisa nabantu. Basenokudala izikhala zomntu ngokwahlukeneyo kumalungu ahlukeneyo.
Izifundo kwi-Ape Great Empathy
Ngenxa yokuba ii-apes ezinkulu zijongwa njengento ehambelana kakhulu nabantu, kwenziwe izifundo ezininzi kwizilwanyana. Olunye uphando lufumene ukuba i-bonobos ibonisa uhlobo olufanayo "lokusasazeka kwe-yawning" abantu abafumanayo , kubonisa ukuveliseka kwengqondo. Nangona kungenjalo njengosayensi, kukho ubungqina bokuthi ama-apes azivakalelwa ngenye indlela kubonwa ngabantu, njengomnqweno kaKoko i gorilla unomntwana, unxibelelwano ngolwimi lwesandla kwaye udlala.
UJeffrey Masson ungumlobi othi "Xa iindlovu zilila," iqoqo ekhangayo yeengcoko malunga nempilo yengqondo yendlovu (kunye nezinye izilwanyana ezimbalwa). Wachaza umsebenzi wakhe, kunye neengxelo eziqhelekileyo malunga nesimo sezesayensi kunye nezilwanyana, encwadini yakhe, eyaphela kuphela nje ngodidi lweengxelo ze-anecdotes. Nangona kunjalo, kuba ezininzi izindlovu zigcinwa ekuthunjweni kwaye abantu baye baxhalabisa, kuye kwaqhutyelwa uphando oluthe gqolo kulezi ziqhwaba zincinci, kwinqanaba elincinci. Ngemizekelo, izindlovu ziye zaboniswa ukuba zihlale kunye nabagulayo okanye zenzakele, nangona xa indlovu eyingozi ingekho intsapho. Ziyabonakala ngathi zibuhlungu; Indlovu yendlovu eyazala umntwana osweleyo yazama iintsuku ezimbini ukuyivuselela.
Amalungelo amaninzi asezilwanyana kunye neentlalontle zentlalontle ziye zabonisa ukuxhalabisa ukuba ingxoxo malunga nokuba izilwanyana ziyaziva ziqhubeka, kunokuba ingxoxo malunga nendlela esinokuphatha ngayo kakuhle izilwanyana esiziziyo.
Uphononongo lwentetho yesilwanyana luya kuqhubeka iminyaka ezayo. Nangona sicinga ukuba siyazi kakhulu malunga nendlela izilwanyana ezivakalelwa ngayo kunye nokuqonda ihlabathi, sinokuningi okuninzi ukuze sifunde.
Indlela izilwanyana ezityalwa ngayo
10 Iinkcukacha Ngeentlanzi
Imigaqo yokukwabelana ngeKholeji yaseKholeji
Ulwabiwo-nkcazo Inkcazo: Ukuchitha iiBill kwiCongress
I-Chemistry Izibhalo Ukuqala ngeleta C
Umbono kaSathana ngoBomi noKufa
Ukuvakalisa iikhontrakthi ezifana 'Nangona' kunye 'Nangona kunjalo'
Impendulo yamaKrestu ukuxeka
Yintoni iHook kuMculo?